Ahoana ny fomba hananatra mafy ny alika | Tontolo alika
Na dia marina aza fa tsy tokony havelanay alika ny fitondran-tena sasany, dia tsy maintsy ekentsika izany mibedy azy amin'ny fomba tsara dia tsy asa mora na mahafinaritra. Mila mitady fotoana mety amin'izany isika, mampiasa feo madio sy malefaka, ary mazava ho azy fa tsy tokony hampiasa sazy ara-batana velively isika. Ireo no lakilen'ny teneno mafy ny alika.
Tokony ho fantatsika fa ny fananarana ny alika dia ahitsio ny fihetsik'izy ireo, tsy hanasazy azy mihitsy amin'ny fikasana hanao azy "hisaintsaina." Ireo dia fomba azo ampiharina amin'ny olombelona, ​​fa ny alika kosa dia mianatra amin'ny alàlan'ny karazana fanabeazana hafa. Amin'izy ireo, ny sazy dia vao mainka miharatsy ny toe-javatra ary tsy mahay mandanjalanja.
Ho an'ny vao manomboka, tsy misy ilana azy ny mibedy alika ora aorian'ny nandraisany fitondran-tena ratsy. Amin'ity fomba ity tsy fantatrao ampifandraiso ny fihetsikay amin'ny ataon'izy ireo, mba hahafahanay mamorona fikorontanana amin'ny fanabeazana anao. Raha ohatra ka miteny mafy azy isika rehefa miala voly amin'ny iray amin'ireo kilalaony noho ny zavatra ratsy efa nataony teo aloha, dia mety hampifandraisin'ilay biby amin'ny zava-dratsy izy ary tsy hanatona azy intsony.
Etsy ankilany, zava-dehibe ny hanazavana fa ny ady dia tsy mitovy amin'ny kiakiaka na tezitra. Ny hamafin'ny fanitsiana dia tsy maintsy hentitra nefa milamina, raha tsy izany dia hiteraka tsy fahatokisan-tena sy tahotra ao amin'ny alikanay isika. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hampiasa teny vitsivitsy isika: "tsia" na "fijanonana" tsotra dia ho ampy izany. Ny tanjona dia ny hampifandraisanao amin'ny teny ratsy ity teny ity.
Aorian'ity fananarana ity dia tsy maintsy asehoy ny alika izay tokony hatao, amin'ny fomba fanitsiana. Raha mahita azy mitsakitsaka ny kirarantsika iray ohatra isika dia tokony "hananatra" azy vetivety ary avy eo asehoy azy ny kilalao azony milalao.
Araka ny efa nolazainay teo aloha dia tsy ekena tanteraka ny kapoka sy ny kiakiaka. Tokony hanao izany koa isika fisorohana ny fitokanana ho sazy. Angamba ny fanidiana ny alikantsika vetivety dia toa hevitra tsara, fa ny zava-misy dia mety hiteraka korontana sy alahelo lehibe izany.
Farany, mila izany isika fatra faharetana hanitsiana ny fihetsika ratsy alikanay. Raha miasa am-panajana sy fitoniana ary fitiavana isika dia ho afaka hanabe ny biby fiompintsika nefa tsy hanimba ny fahatokisan-tenany na hanisy ratsy azy mihitsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hananatra mafy ny alika
Mankalaza ny Andron'ny alika ny Twitter